Bit By Bit - Misa kubatsirana - 5.5.4 Enable kushamisika
Zvino kuti une heterogeneous vanhu kushanda pamwe chete dambudziko chinangwa nesayenzi, uye une pfungwa dzavo dzirambe dziri apo kunogona chinokosha, iva nechokwadi kusiya nzvimbo kuti ichakushamisa. Zviri wakanaka inotonhorera kuti mugari masayendisiti akapomerawo mapoka enyeredzi ari Galaxy Zoo mheto mapurotini pana Foldit. Asi, chokwadi, ndizvo zvinorehwa zvirongwa izvi akagadzirirwa vakwanise. Chii chinotonyanya zvinoshamisa, rangu pfungwa, ndechokuti nharaunda idzi nemigumisiro kwesayenzi vaiva unanticipated kunyange creators avo. Somuenzaniso, Galaxy Zoo munharaunda akawaneiko uye boka itsva yezvomuchadenga chinhu kuti vakatumidza "Green Peas."
mangwanani zvikuru Galaxy Zoo chirongwa, vanhu vashoma ndacherechedza kujairika mitema zvinhu, asi kufarira pavo akapfupikisa apo Hanny Von Arkel, mudzidzisi Dutch chikoro, akatanga rakakoshwa Galaxy Zoo nhaurirano Forum pamwe catchy title: "Ipai Peas ane . Chance "The shinda, iyo August 12, 2007 akatanga, akatanga majee:" uri achiunganidza navo kudya "," Peas mira ", uye zvichingodaro. Asi, runako nokukurumidza vamwe Zooites akatanga vaiswe pizi dzavo. Nokufamba kwenguva nembiru akava zvikuru hwokugadzira uye hwakadzama kusvikira nembiru seizvi akatanga kuratidza kumusoro: "The OIII mutsetse (the 'pizi' mutsetse, pana 5007 angstrom) kuti uri kutevera inochinja akananga tsvuku sezvo Z kunowedzera uye haarambi kunyika infra-tsvuku panenge z = 0.5, kureva asingaoneki " (Nielsen 2012) .
Nokufamba kwenguva Zooites vakanga zvishoma nezvishoma kunzwisisa uye systematizing Zvaanoona dzavo pizi. Pakupedzisira, musi waJuly 8, gare gare-Carolin 2008-kusvika gore Cardamone, imwe zvenyeredzi akapedza kudzidza mudzidzi pana Yale uye nhengo Galaxy Zoo chikwata, akabatana neshinda kubatsira kuronga "pizi Hunt." More nechido basa dzakatevera uye July 9, 2009 pepa rakanga dzakabudiswa Monthly Notices the Royal Astronomical Society ne rokuti "Galaxy Zoo Green Peas: Kuwanika ane Kirasi Compact aiva Star-Achigadzira enyeredzi" (Cardamone et al. 2009) . Asi, kufarira pizi haana kugumira ipapo. Zvadaro, vanga nyaya kumwe kutsvakurudza kuburikidza vanoongorora nyeredzi kupota nyika (Izotov, Guseva, and Thuan 2011; Chakraborti et al. 2012; Hawley 2012; Amorín et al. 2012) . Zvadaro, muna 2016, makore asingasviki 10 pashure wokutanga romukova pedyo Zooite, pepa yakabudiswa muna Nature aronga Green Peas sechinhu zvichibvira tsanangudzo inokosha uye gahadziko muenzaniso ari ionization wezvose. Hapana izvi nokusingaperi vafungidzira apo Kevin Schawinski uye Chris Lintott wokutanga akakurukura Galaxy Zoo ari pub Oxford. Sezvineiwo, Galaxy Zoo zvakaita mhando aya dzaisatarisirwa isingatarisirwi nokungomaka nokubvumira vechikamu kutaura mumwe.